မွေးနေ့ အလှူ အဖြစ် စာအုပ် လိုက်ရောင်း တဲ့ ဆရာကြီးတွေကို လှူဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ လင်းမြတ် – Shwewiki.com
မွေးနေ့ အလှူ အဖြစ် စာအုပ် လိုက်ရောင်း တဲ့ ဆရာကြီးတွေကို လှူဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ လင်းမြတ်
MRTV4မင်းသားလေး လို့ လူသိများ တဲ့ နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချော လင်းမြတ် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ သူ သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းများစွာ လည်းရှိတာကြောင့် ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် လင်းမြတ် က သူ့ရဲ့ မွေးနေ့အကြို အလှူအဖြစ် တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း စာအုပ်လိုက်ရောင်းတဲ့ ဆရာကြီးတွေကို လှူဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လင်းမြတ် က ကျိန်စာပြယ် ဒဏ္ဍါရီ ၊ ရွှေကြာဖူးသစ် စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲများ ကို သရုပ်ဆောင်ထားသလို လက်ရှိမှာ ပြသနေတဲ့ အခန်း နံပါတ် ? ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ရောင်ထွန်း ဇာတ်ရုပ် ကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင် နေတာ တွေရပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ လင်းမြတ် က ” ကိုယ့်မွေးနေ့အကြိုကုသိုလ်အဖြစ် ဒီဆရာကြီးတွေစာအုပ်လိုက်ရောင်းနေတာမကြည့်ရက်လို့ စားချင်တာစား သောက်ချင်တာသောက်ဆိုတော့ အအေးလေးပဲသောက်ပြီး စားစရာတော့အိမ်ကမိသားစုနဲ့စားပါရစေဆိုလို့ ထမင်းကြော်တွေ ခေါက်ဆွဲကြော်တွေစိတ်ကြိုက်လှူလိုက်ပါတယ် တိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာလေးစားလို့ပါ !N.B – ကျနော့်ကိုခင်ရင် အဲ့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင် တတ်နိုင်သလောက် လက်ဆင့်ကမ်းအလှူလေးတွေလုပ်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ် 🙏🙏🙏” ဆိုပြီး ပြောထားသလို။
” ပြန်တော့ လေးစားပါတယ် ဗိုလ်ကြီးဆိုပြီးအလေးပြုတော့ ရင်ထဲနှင့်သွားတာပဲ ” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် လင်းမြတ် ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ မွေးနေ့အလှူ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေ သိရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
မှေးနေ့ အလှူ အဖွဈ စာအုပျ လိုကျရောငျး တဲ့ ဆရာကွီးတှကေို လှူဖွဈတယျ ဆိုတဲ့ လငျးမွတျ
MRTV4မငျးသားလေး လို့ လူသိမြား တဲ့ နိုငျငံကြျော သရုပျဆောငျ မငျးသားခြော လငျးမွတျ ဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှေ ခဈြခငျအားပေးရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပါ။ သူ သရုပျဆောငျ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျလမျးမြားစှာ လညျးရှိတာကွောငျ့ ခဈြခငျအားပေးတဲ့ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာတော့ မိုမိုလေးရဲ့ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ သရုပျဆောငျ လငျးမွတျ က သူ့ရဲ့ မှေးနအေ့ကွို အလှူအဖွဈ တဈအိမျတကျ တဈအိမျဆငျး စာအုပျလိုကျရောငျးတဲ့ ဆရာကွီးတှကေို လှူဖွဈတယျ ဆိုတဲ့ အကွောငျး ကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
လငျးမွတျ က ကြိနျစာပွယျ ဒဏ်ဍါရီ ၊ ရှကွောဖူးသဈ စတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲမြား ကို သရုပျဆောငျထားသလို လကျရှိမှာ ပွသနတေဲ့ အခနျး နံပါတျ ? ဇာတျလမျးတှဲမှာ ရောငျထှနျး ဇာတျရုပျ ကို ပီပီပွငျပွငျ သရုပျဆောငျ နတော တှရေပါတယျ။
ဒီတဈခါမှာတော့ လငျးမွတျ က ” ကိုယျ့မှေးနအေ့ကွိုကုသိုလျအဖွဈ ဒီဆရာကွီးတှစောအုပျလိုကျရောငျးနတောမကွညျ့ရကျလို့ စားခငျြတာစား သောကျခငျြတာသောကျဆိုတော့ အအေးလေးပဲသောကျပွီး စားစရာတော့အိမျကမိသားစုနဲ့စားပါရစဆေိုလို့ ထမငျးကွျောတှေ ခေါကျဆှဲကွျောတှစေိတျကွိုကျလှူလိုကျပါတယျ တိုငျးပွညျအတှကျတာဝနျတှထေမျးဆောငျပေးခဲ့တာလေးစားလို့ပါ !N.B – ကနြေျာ့ကိုခငျရငျ အဲ့လိုလူတှကေိုတှရေ့ငျ တတျနိုငျသလောကျ လကျဆငျ့ကမျးအလှူလေးတှလေုပျပေးကွပါလို့တောငျးဆိုပါတယျ 🙏🙏🙏” ဆိုပွီး ပွောထားသလို။
” ပွနျတော့ လေးစားပါတယျ ဗိုလျကွီးဆိုပွီးအလေးပွုတော့ ရငျထဲနှငျ့သှားတာပဲ ” ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ။
သရုပျဆောငျ လငျးမွတျ ရဲ့ မှနျမွတျတဲ့ မှေးနအေ့လှူ အကွောငျးကို ပရိသတျတှေ သိရလောကျပွီ ထငျပါတယျ။
မိမိတို့ ရဲ့ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက် မှ အသေအပျောက် မရှိခဲ့ဘူး လို့ ထရမ့် ပြောပြီ
ဩစေ တးလျနိုင်ငံ တော မီးကြားထဲမှာ မီး လုံးဝ လောင်ကျွမ်း ခြင်း မရှိ ပဲ ကျန်ခဲ့ တဲ့ ကျွန်းသစ်တွေ နဲ့ ဆောက်လုပ်ထား တဲ့ ထိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း